७ महिनामा १५ करोड बढिको सुनको गहना निर्यात,कुन देशमा जान्छ ? - DURBAR TIMES
HomeEconomy७ महिनामा १५ करोड बढिको सुनको गहना निर्यात,कुन देशमा जान्छ ?
७ महिनामा १५ करोड बढिको सुनको गहना निर्यात,कुन देशमा जान्छ ?
पछिल्लाे एक वर्षमा नेपालमा सुनकाे मूल्यमा अत्यधिक बृद्धि भएकाे छ । तर, नेपालमा सुनमाे गहना खपतमा भने कमी आएकाे छैन । काेराेनाकाे महामारिमा केही कमी भएपनि हाल पुरानै अवस्थामा सुनचाँदी बजार फर्किसकेकाे छ ।
विदेशी भूमीबाट नेपालमा सुन आउनेमात्र तत्थ्याङ्कलाइ पछि पार्दै याे वर्ष नेपालले सुनका गरगहना निर्यात समेत गरेकाे छ । नेपालबाट पछिल्लाे सात महिनामा मात्र १५ कराेड ६७ लाखभन्दा बढीकाे सुनकाे गहना निर्यात भएकाे तत्थ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेकाे छ ।
विभागका अनुसार सात महिनामा नेपालबाट अष्ट्रेलिया, हङकङक र अमेरिकामा सुनकाे गहना निर्यात भैरहेकाे छ । ती ठाउँहरूमा नेपालीहरूकाे संख्या बढ्दै गएकाले नेपाली गहनाहरूकाे माग पनि बढिरहेकाे विभागकाे तत्थ्याङ्कले देखाएकाे छ ।
सत्ता गठबन्धन भए कालाेमाेसाे दल्ने उपराष्ट्रपति पुत्रकाे चेतावनी
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छाेरा दिपेश पुनले अब माओवादीले एमालेसँग सत्तागठबन्धन कुनैपनि हालतमा बनाउन नहुने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार बिहान फेसबुकमा लेख्दै विद्यार्थी नेता रहेका पुनले पार्टी एकता बाहेकमाओवादी र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन लाग्ने माओवादीका नेतालाई सडकमा ल्याएर कालोमोसोदल्ने चेतावन…
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सक्ने भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती
काठमाडाैं | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्ने भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउनचुनौती दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भनेरसोध्न आग्रह पनि गरेका छन् । सोमबार १११ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीओलीले सो बताएका हुन् । ’उहाँहरुले नेकपाक…
Previous articleसत्ता गठबन्धन भए कालाेमाेसाे दल्ने उपराष्ट्रपति पुत्रकाे चेतावनी
Next articleमन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै